မှော်ဆရာ့ အိပ်မက်များ: 2011
ဘ၀ပါးပါးတွေ ခ၀ါချပြီး စတေးနေရတုန်းဘဲ
ဘိုးဘွားတွေရဲ အမွေအနှစ်ကို လည်ညှိုးထိုးရောင်းစား
လူလုံးထွားရမှ နေသာထိုင်သာ ရှိတယ်ထင်ပါ့
ခေတ်မှီလှပါတယ်ဆိုရဲ ခင်ဗျားရဲ့ အဆောင်ယောင်တွေကြားမှာ
ဒါနဲ့များ ပိုလိုလျှံလို့ ပြည်ပကို ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကား
ခင်ဗျာတို့မို့လို ပြောထွက်တယ် အံ့ဩမိ့ပါရဲ့ ရန်ကုန်...
ပန်းနာ ရင်ကျပ်၊ တီဗီ နဲ့ ခုခံအားကျတဲ့ရောဂါ
ဒီကြာထဲ တစ်ခါမှ မကြားဖူးတဲ့ နားရွက်ပြာရောဂါ
တစ်ပြုံတစ်ထွေးလုံး ခင်ဗျားမွေးမြူလို့ကောင်းတုန်ဘဲ ထင်ပါ့
ကျွန်တော်သိ့တဲ့ အရင်က ရန်ကုန်မှာ
ဘာဆိုဘာတစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူးထင်လို့ ရန်ကုန်လို့
ရေချိန်မကိုက်သေးတဲ့ ဇိုးသမား တစ်ယောက်လို
လက်ရှိ အခြေနေရ ခင်ဗျားဟာ
မထင်မရှားနဲ့ မြို့ကလေး တစ်မြို့လို....
လူနာနဲ့ ဘ၀တူတွေ ဖြစ်နေပြီရန်ကုန်...
ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားကို ကျုပ်တို့ ချစ်နေတုန်းဘဲ ရန်ကုန်
ကံမကုန်ရင်တော့ ပြန်ဆုံခြင်ပါရဲ့ ချစ်သောရန်ကုန်..
Posted by Nay Linn Aung at 6:42 PM No comments:
ချစ်သောဧရာဝတီ အတွက် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းကျပါအုံးဗျို့
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ချစ်လှစွာသော ဧရာဝတီအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးချင်သူတိုင်း အတွက် Green Hearts ကလုပ်တဲ့ ဆုတောင်းပုံလေကို ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်ဗျာ စိတ်ကြိုက် ဆုတောင်ပြီးတော့ greenheartsenvironment@gmail.com ကိုပေးပို့လိုက်တာနှင့် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏ Facebook Wall ပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်... မူရင်းပုံကိုတော့ အောက်မှ Download လုပ်ယူနိူင်ပါတယ်နော်...
Posted by Nay Linn Aung at 6:16 PM No comments:
ဒီနေ့ ဒီရက် ငါဘယ်တော့မှ မမေ့
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကြောင့်
ငါတို့ရဲ့ နောင်တော်တွေ ညီအစ်ကိုတွေ
Posted by Nay Linn Aung at 11:07 AM No comments:
နာရီ နှင့် လူ
နာရီပေါ် မျက်ရည်စတွေ ကျခဲ့ဘူးတယ်...
ခုခါများ ကြားခြင်လည်း မကြားရ
အဲ့ဒါ နှလုံးသားတိုင်း အတွက် အဟာရတွေ
နာရီ နှင့် တူသောလူပါဗျာ...
Posted by Nay Linn Aung at 11:59 AM No comments:
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း မနက်မိုးလင်းကတည်းက အလုပ်ခွင်အမှီ သုတ်သုတ်သွား သုတ်သုတ်လား၊ ပျားပန်းခတ် လှုပ်ရှား အသက်ရှင်နေရတဲ့ကြားထဲကနေ ရုပ်ဝထ္တုတွေကို တပ်မက်စွဲလမ်းတဲ့ရောဂါ လူတော်တော်များများ ကူးစက်ပျံပွားနေကျပြီ ဟုဆိုလျှင် လွန်မည်မထင်။
အဲ့ဒီရောဂါထဲမှာ အပြင်းဆုံးက iPhone4 , iPad2, Tablet PC နှင့် Smart Phone များ ထိပ်ဆုံးကနေရာယူ ထားကျသည်ဆိုလျှင် မည်သူ ငြင်းချက် ထုတ်မည်နည်း?
တစ်ချို့ တော်တော် သနားစရာ အကောင်းသားဗျ သူများ " i" တိုင်း လိုက် " i" လိုက်တာ၊ ကိုယ်တိုင်က မယ်မယ်ရရ သုံးတတ်လို့ မဟုတ်၊ သီးချင်းနားထောင်ရုံ၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်ရုံနဲ့တော့ အဲ့ဒီ စမတ် ဖုန်းတွေ မသုံးကျပါနဲ့ဗျာလို့ ပြောချင်ပေမဲ့၊ လူတိုင်း ကိုယ်စီ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ရှိပြန်တော့ ဒီအတိုင်း ဘဲကောင်းပါတယ်ပေါ့ဗျာ....
တစ်ကယ်တမ်းတော့ ရုပ်ဝထ္တုနောက်လိုက်သည် ဖြစ်စေ၊ မလိုက်သည် ဖြစ်စေ၊ အဓိက သိ့နားလည်း သင့်တာက ကိုယ်သုံးချင်တဲ့၊ ကိုယ့်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ အရာကို နေရာတကျ အသုံးပြုနိူင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ၊ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေက အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြောင့် စိတ်ဖိ့စီးမှုတွေရှိလာနိူင်ပါတယ်၊ ကိုယ်သုံးမလို့ ၀ယ်ပြီးကာမှ ဟိုတွေး ဒီတွေး ၊ အပိုကုန်မှာစိုးလို့ တစ်ကယ့်လိုအပ်လို ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ Service တွေကို ပိတ်လိုပိတ်၊ ဟိုဟာမရ ၊ ဒီဟာမရလို့ စိတ်ညစ် အလုပ်အားတာနဲ့ အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို ထိုင်ထိုင်ပြီး ကလိရတာ လူကိုမောလို့၊ အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့
ကျွန်တော့်စိတ်ထင် အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် မတန်ဘူးဗျ...
ငွေကုန် လူပန်း အကျိုးမရှိ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မသုံးလို့၊ မသုံးနိူင်လို့ ဘေးထိုင် ဘုပြော ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါ၊ ရုပ်ဝထ္တုပစ္စည်းတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မသိ့မသာ ခံစားနေရတာ တွေ့နေရတော့ မနေနိူင် မထိုင်နိူင်ရေးဖြစ်တာပါ...
ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခု ၀ယ်တော့မယ် သုံးတော့မယ် ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ၊ သုံးချင်တာနဲ့ ကိုက်ညီအောင် စဉ်းစား လေ့လားပြီးမှဘဲ ၀ယ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီလိုဘဲ သူငယ်ချင်းတို့ တစ်တွေလည်း ၊ Shopping Guide တွေ၊ Tech Guide တွေ သေသေချာချာ ဖတ်မှတ်ပြီး လေ့လာသင့်ပါတယ်...
ကောင်းပါတယ် နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတော့၊ Social Media (လှုမှုရေး မီဒီယာ) ကွန်ယက်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ဆို Smart Phone တစ်လုံးရှိရုံနဲ့တင် ကမ္ဘာ ပတ်လို့ရတဲ့ အခြေ အနေဖြစ်နေပြီ...
အဲ့ဒီတော့ကာ ၊ လူမှုရေး မီဒီယာတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီး တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိူင် ကျပါစေလို့
ငါ့ အလှည့် ဘယ်တော့လဲ ?
ဘယ်လောက်များခဲ့ ပြီလဲ ?
မသိ့ကိန်းတွေ ပေါင်းစုရာ နေရာ...
ဒီလိုနဲ့ အချိန်ကို ငွေနဲ့ လဲလှယ်
Super Sonic နဲဆို
နေခြင်းပြီး ငါတို့ ခရီးဆန့်လိုရတယ်.....
GPS တစ်လုံးလို ငါ အသက်မရှင်ချင်ဘူး
အဲ့ဒါက အတိုင်းအတာတွေဆိုတဲ့ အသိ့
ဗြုန်းဆို ICEBerg တစ်ခု
နေ့ချင်းပြီးတဲ့ ပြဇာတ် တစ်ပုဒ်
ဘယ်လို Algorithm မျိုးကိုမဆို
Posted by Nay Linn Aung at 12:28 AM No comments:
ငါ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ စီးကရက် ဖင်စီခံ
ငါ ဒီလောကကြီးနဲ့ နေသားမကျသေးမှန်
ငါ့ကို ပြန်ပြီး ရိုက်ဆစ်တယ်
Posted by Nay Linn Aung at 1:46 AM 1 comment:
ချစ်သောဧရာဝတီ အတွက် ၀ိုင်းဝန်းပြီး ဆုမွန်ကောင်းတွေ...